Android ama macruufka: kee doortaa? | Wararka IPhone
Android ama macruufka: kee doortaa?
Paul Aparicio | | Android, macruufka
Android ama macruufka. macruufka ama Android. Tani waxay u muuqataa inay tahay su’aasha aan hayno mar kasta oo aan dooneyno inaan cusbooneysiino casriga casriga ah. Nidaamyada kale ee harsan uma muuqdaan kuwo ikhtiyaar ah haddii aan tixgelinno in inta u dhexeysa nidaamyada hawlgalka moobiilka ee Apple iyo Google ay ka badan yihiin 96% saamiga suuqa aduunyada Labaduba waa nidaamyo hawlgal oo aad uwanaagsan cilladahooda iyo wanaaggooda iyo waxa aan u baahannahay inaan raadino ayaa ah midka ugu fiican midkeen kasta Qodobkaan waxaan isku dayi doonaa nadiifi shaki weligiis ah Xogta ujeeddada leh laakiin, sida aad u maleyn karto haddaan qoro iPhone maanta, maqaalka waxaa qoray qof adeegsada oo jecel macruufka.
1.1.3 Cimri dherer
1.1.5 Nidaamka deegaanka.
2.2.1 Heerka hoose ee amniga.
Sida isticmaale macruuf ah iyo ugu dambeyntii isticmaalaha Android, waxaan u maleynayaa waxa ugu fiican ee ku saabsan iOS inay tahay raaxada ay na siiso hal nidaam taasi waa horumar. Intaas waxaa sii dheer, Apple wuxuu ku soo rogaa waxyaabo gaar ah sida codsiyada ay u shaqeeyaan iyo wax walbana waa isku midSi ka duwan waxa ku dhaca Android, codsi kasta wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan. Tusaale ahaan, si loo kaydiyo ama loo tafatiro sawir, macruufka kaliya waa inaan farta saarnaa daqiiqad. Haddii ay jiraan xulashooyin, menu ayaa soo muuqan doona. In Android waxaan ku arkay ikhtiyaar isku mid ah siyaabo kala duwan iyadoo kuxiran codsiga ku jira, taas oo aniga aniga igu wareersan.
Tusaale kale oo raaxo leh iyo fududaan waa kaamirada. Waxaan ku heshiin doonnaa in kamarada iPhone kasta aysan waligeed ugu fiicnayn warqad, laakiin waxaan sidoo kale isku raacsanahay in kamarada asalka ah aan ku qaadi karno sawiro aad u fiican adoon wax badan ka aqoonin sawir qaadista.
Ma jiro nidaam hawlgal oo 100% sugan. Waxaan rabaa inaan cadeeyo taas. Taasi waxay tiri, waxay u taagan tahay sababaynta taas Dambiileyaasha internetka waxay diiradda saaraan dadaalkooda ku aaddan nidaamyada inta badan la isticmaalo. Caqli gal ma noqonayso in barnaamij loo sameeyo nidaam aan ficil ahaan la isticmaalin, waana sababtaas sababta Windows (PC) taariikh ahaan ay u ahayd bartilmaameedka ugu weyn ee dambiilayaal noocan oo kale ah, nidaamka moobiillada, iOS-ka ma ahan bartilmaameedka ugu weyn.
Intaa waxaa dheer, macruufka waa nidaam xiran oo xitaa aan ku khasbanaaneyno inaan jebinno amnigiisa si aan u awoodno inaan wax ka beddelno. Inbadan ayaa xidhan waa nidaam hawlgal, ammaan ah waxaa.
Cimri dheereynta ugama jeedo inay sii dheeraanayaan maxaa yeelay way ka xoog badan yihiin, laakiin taa beddelkeeda Apple ayaa dammaanad qaadaysa dhowr sano oo cusbooneysiin ah. IPhone 4, oo la sii daayay 2010, ayaa loo cusbooneysiiyay iOS 7, isaga oo siinaya afar sano oo cusbooneysiin ah. IPhone 4S wuxuu awoodi doonaa inuu rakibo iOS 9, taas oo ah 4 sano oo kale. Aad ayey u adag tahay in la arko sida aaladaha kale loogu cusbooneysiiyo nidaam la sii daayay 4 sano kadib.
Asturnaanta ayaa ah mid aad muhiim ugu ah shirkadda Apple isla markaana waxay caddaynaysaa markasta oo ay fursad hesho. The fariimo sir ah iMessage ilaa Macluumaadka 8 waxay daliil u yihiin. Waa run in Android ay sidoo kale adeegsato xog ka dhigista Lollipop, laakiin waxay sii wadaa adeegsiga nidaamka hawlgalka ee ay leedahay Google, shirkad (hadda ka mid ah shirkad) oo ku salaysa qaabkeeda ganacsi xayeysiinta. Haddii aadan ka walwalin, waxaan kugu martiqaadayaa inaad aqriso boggan.
Ugu dambeyntiina, waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo wax aan muhiim ahayn haddii aad kaliya isticmaasho iPhone, laakiin waa dhibic aad u wanaagsan haddii aad leedahay kiniin iyo kumbuyuutar isla gurigaaga ah. Nidaamka deegaanka wuxuu wax kasta ka dhigayaa mid raaxo leh xitaa haddii ay suurogal tahay. IOS-ka waxaan uga tagi karnaa iPhone qolka cuntada iyo soo wac taleefankaaga Mac-ga ah. Waxaad ku aqrin kartaa bogga internetka iPhone-ka, adigoo furaya iPad-ka isla markaana isla boggaas isku meel ku wada sugaya. Waa raaxo fudud.
Aniga ahaan, waxa ugu fiican ee ku saabsan Android waa noocyo kala duwan. Waxaad ku dooran kartaa mobiil leh naqshadeynta oo aan aad u jecel nahay, waxaan dooran karnaa terminal kamarad fiican leh, waxaan dooran karnaa qaab yar ama waxaan dooran karnaa mid quusin kara. In Android kuma koobna waxa ay shirkaddu noo sheegto. Waxaan nahay kuwa doorta.
Iyadoo leh taleefan Android ah, waxaan waxaan nahay milkiileyaal iyo sayidyada xarunta. Waxaan noqon karnaa "sharci" ama ka yar, sidoo kale waxaan rakibi karnaa codsiyo aan ka jirin Google Play.
Waa nooc kale oo xorriyad ah. On Android waxaa jira tan oo ah rido iyo noocyada kale ee wax ka beddelka isla dukaanka arjiyada, si la mid ah tan macruufka waxaa ku jira kumbuyuutar dhinac saddexaad ah tan iyo imaatinka macruufka 8. Si kastaba ha noqotee, Android gudaheeda teebabkaas ayaa jiray muddo dheer. IOS waxaa lagama maarmaan ah in la xiro si loo awoodo in wax laga beddelo sawirka nidaamka, wax aan had iyo jeer la heli karin (sida hadda).
Runtii inbadan oo idinka mid ah ma fahmi doontaan waxa aan ula jeedo. Waxaan ula jeedaa waan awoodnaa ku xir qalabka Android kombuyuutarka oo caleenta galkaaga adigoon waxba rakibin Waa run oo haddii nidaamku adeegsado qaabka NTFS, OS X ma akhrin karo, laakiin wuxuu la jaan qaadayaa Windows, Linux iyo Mac kasta oo ay ku rakiban yihiin Tuxera ama Paragon NTFS.
Sidoo kale, la wadaagida qalabka Android waa sahlan tahay ka badan on macruufka. In kasta oo ay run tahay in macruufka 8aad ay jiraan wax dheellitirnaan ah, taas oo noo oggolaanaysa inaan feyl ka soo dirno hal codsi mid kale, haddana sidoo kale waa run oo ma awoodi doonno inaan wax ugu dirno Bluetooth ama AirDrop qalab aan Apple ahayn.
Hadaad aqbasho iyaga, waa hagaag. Haddii kale, waxaa jira xaddidaadyo badan oo aanad qaadi karin. Tusaale ahaan, on macruufka ah ma haysanno emulators on App Store. Emulators waa wax inbadan oo naga mid ah oo ciyaaray mashiinada arcade ee 90-meeyadii ay jeclaan lahaayeen inay ku helaan macruufka. Si kastaba ha noqotee, Android waxaa ku jira emulators Google Play dhammaan noocyada, qaababka iyo cabirka.
In kasta oo ay run tahay in Samsung ay qiimo sare saartay Galaxy S6, haddana sidoo kale waa run in ay tahay kiis go'doon ah. Markaan iibsaneyno iPhone waanu bixin doonaa ilaa € 200 dheeraad ah ka badan marka aad iibsaneyso inta badan nooca dhexe ee dhexe ee Android. Taasi ma aha in la xuso heerka hoose ee hoose, kaas oo qiimaha iPhone-ka aan ku iibsan karno afar ama shan taleefannada Android.
Heerka hoose ee amniga.
Sida Google sheegayo, Android looma dhisin inay amaan ahaato, hadaan la furin. Tani waxay u sahlaysaa waxyaabaha qaarkood inay dhacaan, sida codsi xaasidnimo ah oo hawsheeda qabanaya. Waa qiimaha furitaanka.
Android waxaa loo sameeyay si ay u awoodaan inay gaaraan tirada ugu badan ee qalabka suurtagalka ah. Tani waxay kaa dhigeysaa inaad ku qasban tahay ku ordo mashiin farshaxan ah. Si ay si fiican ugu shaqeyso dhamaan qalabka, nidaamka waa in loo sameeyaa qalab kasta, tanina waa wax aan macquul aheyn. In Android waxaa jira laba nidaam oo socda, waxaan dhihi karnaa mid waa saldhigga mid kalena waa midka aan ognahay. Taasi waa sababta qalabka Android u baahan yahay qalab aad u awood badan Haddii aad waligaa ku isticmaashay mashiin kumbuyuutar kumbuyuutar, waad fahmi doontaa waxa aan ula jeedo. Midkoodna "nidaamka salka" ama "nidaamka martida loo yahay" wuxuu ku dambeeyaa inuu yeesho processor iyo / ama dhibaatooyin RAM ah tanina waxay u badan tahay inay ku dhacdo qalabka Android sidoo kale
Qaawiyey dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, ha ka waaban inaad fikirkaaga uga tagto faallooyinka. Maxaad doorataa: Android ama iOS?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Android ama macruufka: kee doortaa?
Waan ku jeclahay macruufka fudeydkiisa ay leedahay, kama ihi kuwa ka mid ah kuwa malaayiin wax u dira isticmaaleyaasha kale, laakiin waxaan u isticmaalaa kaliya ciyaaraha, haa, ciyaaraha, anigu dan kama lihi waxaad leedahay, laakiin waa waxa Waan doortay, sidoo kale waxaan jecelahay nacnaca sidoo kale, waa wax fiican, laakiin kuma beddelo macruufka illaa Android .. Xitaa haddii taleefankayga iPhone 6 uu gaabis yahay, waxaan u maleynayaa in ciyaaruhu si dhakhso leh iigu socdaan!
Waa ra'yi aan la wadaago, aniga ahaan macruufka iOS ayaa ii ahaa waxa ugu fudud ee jira, sidoo kale amniga uu noo keenayo awgood (oo aan kuu sheegay inaan ku jiro heer sare oo amniga kumbuyuutarka ah) waana jeclahay amniga!
Waxaan dhawaanahan arkay fiidiyow ay dadka isticmaala ka dhigayaan inay aaminaan in iyaga la baray beta ka mid ah IOS9 qof walbana wuxuu ku faraxsanaa dhammaan astaamaha, wijidka iyo kuwa kale ... laakiin wuxuu ahaa android wax laga beddelay oo lagu rakibay iphone-ka dhexdiisa, way iska cadahay , tufaax fanboys waxay marwalba rabi doonaan tufaax Wax kastoo ay qaadato Waxaan u wareegay android waana ku faraxsanahay isbedelka! Way dhaaftay qarash gareynta lacag aad iyo aad x x moobil sanadki kii horena wuu duugoobaa markay cusbooneysiiyaan OS.
Waxa kaliya ee aan tabay waa tufaax, aad ayey ugafiicantahay dhanka daaweynta sawirada iyo wankii laqaday.
Waxaan la joogaa macruufka
Waxaan la joogaa IOS,
Ku jawaab Amilcar
Arintiisu waa in la hehee labada heheej laakiin hadii ay tahay inaan mid doorto, shaki la'aan iOS
4ta sano maheli doonaan 4 sano oo taageero ah. Waxaad haysan doontaa 5 mar markaad cusbooneysiiso iOS 9
Hi marcos. Waad saxan tahay, laakiin waa hubaal hubaal, 4. Ma ogin goorta ay joojinayso cusboonaysiinta. Waxyaabaha macquulka ahi waa inay yimaadaan xagaaga soo socda, oo noqon doona 5 sano, laakiin waxaa jira (hooseeya) suurtagalnimada inay bilaabi doonaan iOS 9.1 oo ay halkaa ku sii negaan doonaan. Haddii aan idhaahdo waa shan sano, qaar "fiican" ayaa igu odhan doona ha ka jarin, markaa waxaan go'aansaday inaan taxaddar ka muujiyo arrintaas. Sikastaba, waxaan ula jeedaa 4 iyo tirinta, in afarta sare mar dambe, wali waxaan aragnaa sida ay u cusbooneysiiso.
Waayahay Horaanba u maleeyay in xabbaduhu halkaas u bixi doonaan.
Kaliya waxaan ka faalloonayay maxaa yeelay haddii aad tixgeliso in iPhone 4 uu lahaa 4 sano oo cusbooneysiin ah oo laga soo qaaday macruufka 4 ilaa iOS 7, isla xisaabtan 4s ay leedahay 5, laga bilaabo iOS 5 ilaa iOS 9.
Laakiin aan wada caddayno 🙂
Haa, laakiin ogow in iPhone 4 horey u joojiyay cusbooneysiinta. Waxaa la cusbooneysiiyay laga bilaabo 2010 ilaa 2014, iyadoo la gaarsiiyay noocii ugu dambeeyay ee iOS 7. Waxaan ognahay in iPhone 4s uu jiro 4 sano, laakiin waxay u badan tahay inuu yahay 5. Xitaa macquul maahan in la sii cusbooneysiiyay. Taasi waa sababta aan sidoo kale u tixraaco xilligan xaadirka ah.
Kadib markaan aqriyay maqaalka oo dhan, waxaan kaliya kuugu hambalyeyn karaa, Pablo. Akhrisku waa mid wacan oo la fahmi karo haddii aadan khibrad u lahayn, waxay muujineysaa faa iidooyinka guud iyo kala duwanaanta labada OS.
100 OS XNUMX% waa tan ugufiican, isku xirnaasho badan oo udhaxeysa aaladaha OS and OS iyo Mac OS X, oo gacanta laguhayo. Naqshadaynta ugufiican!
Jawaab si Luis Alfredo
VDayaanna ((@xDayaannax) dijo
LABADOODABA. Waa maxay sababtu? Waxaan hayaa kiniin weyn oo Nexus ah iyo iPhone-kayga shaqsiga ah, looma baahna inaad isku koobto hal keliya.
Jawaab Fer Velázquez (@ferrvlqz)
Israa'iil Ojeda Verdugo dijo
Dabcan, sifiican uma soconeyso, laakiin waa inaan tixgelin siino in 4S uu yahay mobiil laga soo bilaabo 2011 ... ma jiro Android sanadkaas ka shaqeeya ilaa taariikhda Android L si rasmi ah.
Jawaab Israel Ojeda Verdugo
Jawaab Ivonne Murdock
Geesuu Gam dijo
Waxaa la maqlay matadorrrr
Jawaab Gesù Gam
macruufka, maxaa yeelay android wax badan ayuu cunaa RAM wuxuuna abuuraa faylal badan.
Jawaab Rodney Castillo Reyes
Ku jawaab Andres Betancourth
macruufka hubaal. Kahor iibsiga android-ka waxaan helaa Nokia Lumia.
Ujawaab Victor Rojo
Waxba kuma lahan inay tahay bog tufaax ah waxayna weydiinayaan su'aashaas dabcan iOS-na way ka sarreeyaan android haddii uu jiro nidaam runti aan ammaan ahayn waa android ay ka buuxaan barnaamijyo aan waxtar lahayn oo tayo liita ah haddii ay xor yihiin hahahaha
Jawaab Salvador Montes de Oca
Waan ka daalay dadka leh kuwa leh Android waa lacag la'aan, markaa kuwa haysta Galaxy S6 maxay. Marka laga hadlayo taageerada cusbooneysiinta, waxaa habboon in IPhone 4s uu haysto taageero 5 sano ah, halka Nexus 4-ta 2012 ay tahay 3, laakiin farqi ayaa u dhexeeya waana in iPhone-ka uu marayo 5 nooc oo kala duwan (IOS 5, 6, 7) , 8 iyo 9) 5 sano gudahood iyo Nexus 4 waxay maraysaa 5 nooc oo kala duwan (4.2, 4.3, 4.4, 5.0 iyo 5.1) 3 sano gudahood. Waxaan ka hadlayaa Nexus, sidoo kale waa run inay jiraan soosaarayaal sida Samsung oo taageeradooda cusbooneysiintu tahay fudge. Iyo inaad ogtahay in cusbooneysiin kasta oo aan ku sameeyo iPhone 5 aan ku arko gaabis, waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale ku helo iOS 6; halka My Nexus 4 oo cusbooneysiin kasta uu ka sii fiicnaado, haddii ay dhacdo inuu sii xumaadana waxaan hoos ugu dhigi karaa qaybtii hore markaan doono.
Michelle Alvarez muuqaalka booska dijo
Jawaab si Michelle Alvarez
"Markasta oo uu xirnaado nidaamka qalliinka, amnigiisa ayaa sii badanaya."
Ma aaminsani 😉
Ku jawaab SalvaG
Android Wear ayaa hadda ku habboon iPhone-ka